Isiseko sesiseko somatshini wase China mveliso kunye nabenzi | Honghua
I-Ningdong-Shandong ± 660KV iProjekhtha yoQhagamshelo ngqo, iQingdao Converter Station Project Intshayelelo: Iholo levalve lisebenzisa yonke inkqubo yentsimbi, ikholamu yentsimbi eshwabulayo + uphahla lwentsimbi njengenkqubo exhasayo; inkqubo yophahla isebenzise i-purl eluphahleni lwentsimbi
I-Ningdong-Shandong ± 660KV ngqo-yangoku Iprojekthi yoQhagamshelo, Qingdao Converter Station
Intshayelelo yeProjekthi: Iholo levalve lasebenzisa yonke inkqubo yesakhiwo sentsimbi, ikholamu yentsimbi ecekethekileyo + itreyini yophahla lwentsimbi njengenkqubo exhasayo; Inkqubo yophahla isebenzise i-purl eluphahleni lwentsimbi (uphahla lwentsimbi olucwangcisiweyo), ubume benziwe ngophahla lwetshiphu trapezoid, ityhubhu yentsimbi, isibiyeli esithe tyaba, isibonda esimileyo. Isithuba setrifu yophahla yi-34.1m, esona sithuba sikhulu sophahla yi-12.5m, uqhagamshelo lwebha yentsimbi ephezulu kunye nezantsi kunye nekholamu yentsimbi luqhagamshelo oluqinileyo.
Egqithileyo Ilungu lensimbi leGumbi lokucoca iGenerator
Okulandelayo: Ubume bentsimbi kwisikhululo sokuguqula